Misaona ny FJKM: Mpitandrina roa maty tao anatin’ny herinandro | NewsMada
Misaona ny FJKM: Mpitandrina roa maty tao anatin’ny herinandro
Par Taratra sur 25/07/2020
Misaona tanteraka ny eo anivon’ny FJKM. Namoy mpitandrina miisa roa izy ireo tamin’ity herinandro ity. Tsy niandry ela fa nandray fepetra avy hatrany ny eo anivon’ny Birao mpiandraikitra foibe FJKM manoloana izany.
Velom-panahiana mafy ka nandray fepetra. Na­moaka fanambarana tao anatin’ny tambajotran-tserasera ny eo anivon’ny Birao mpiandraikitra ny foibe FJKM (BMF), omaly. «Miantso ireo mpitandrina rehetra hampiato ny asa pastoraly rehetra mandritra izao fihibohana tanteraka izao», hoy ny fanambarana. Anisan’izany ny tsy tokony hisian’ny famangian’ny mpitandrina, ny mivory, ny mampandray fanasan’ny Tompo, ny mandevina… «Maro ireo ni­findran’ny valanaretina Co­ronavirus sy maty noho ireo asa ireo», hoy ihany ny fanambarana eo anivon’ny BMF.
Tsiahivina fa telo ireo mpitandrina namoy ny ainy raha ny tamin’ity herinandro ity fotsiny. Anisan’izany ny teny amin’ny FJKM Betela Maro­biby, Itaosy, Ramamonjisoa Joelina.
Teo koa ny fodiamandrin’ny mpitandrina eny amin’ny FJKM Ambohimanoa Betesta Alasora, Andriamalala Zo Solofonirina, omaly.
Anisan’ireo enina lavon’ny Coronavirus, araka ny tatitry ny CCO rehefa notsaboina sy nialana nenina izy. Hiala etsy amin’ny Hopitaly Befelata­nana ny nofo mangatsiakany anio maraina ary halevina eny Ambohimarina, atsinanan’ Alasora. Nialoha ireo ny mpitandrina tetsy amin’ny FJKM Ankadimbahoaka.
Maromaro ireo mpitondra fivavahana nodimandry
Ankoatra izany, efa namoy ny mpitarika azy, olobe roa, koa ny eo anivon’ny fiangonana FLM. Tahaka izany koa ny eo anivon’ny fiangonana ka­tolika Ekar sy ny METM ary ny eo anivon’ny fiangonana Jesosy mamonjy. Samy lavon’ny valanaretina Covid-19 avokoa ny sasany amin’izy ireo.